Yakavanzika Gwara ▷ ➡️ Android Pop ▷ ➡️
Iyi haisati ichingova mutemo wekuvanzika, ndiko kuziviswa kwandinoita nheyo.
Newe mutoro webhusaiti ino, ndinoda kukupa iwe vimbiso huru yepamutemo dzakanangana nekuvanzika kwako uye nekutsanangurira iwe zvakajeka uye zvakajeka sezvinobvira, zvese zvine chekuita nekugadziriswa kwemashoko emunhu mukati mewebsite ino.
Iyi YeSecurity Policy ichave inoshanda chete kune yako pachako data inowanikwa pane Webhusaiti, isingashande kune iyo ruzivo inounganidzwa nevatatu mapato pane mamwe mawebhusayithi, kunyange kana yakabatanidzwa neIsaiti.
Aya mamiriro anotevera ari kusungira kune mushandisi uye kune munhu ari kutungamira webhusaiti ino, saka zvakakosha kuti utore maminetsi mashoma kuti uverenge uye kana usingaenderane neizvi, usatumire data rako pachako pawebhusaiti iyi.
Iyi pfungwa yakagadziridzwa musi wa 25/03 / 2018
Nekuda kwezvirongwa zveMutemo wakambotaurwa pamusoro peDziviriro Yega Dhata, iyo data yako iwe yaunotumira kwatiri ichaiswa mufaira re "VASHANDI veWEB uye SUBSCRIBers", yavo yeVashandi vepaInternet servicios Telemáticos SL ine NIF: B19677095 uye ne kero muC / Blas de Otero nº16 1º Iz. -18230 - Albolote (Granada). Iyi faira yakashandisa zvese zviyenzi uye kurongeka kwesangano kuchengetedza kwakamiswa muRoyal Decree 1720/2007, yekuvandudza iyo LOPD.
Kutumira uye kurekodha general data
Kutumira data rako pawebhusaiti kunosungirwa kubata, kutaura, kunyorera kune iyo blogpop.com blog, kubvumirana masevhisi anoratidzwa pane ino webhusaiti uye tenga mabhuku mumadhijitari fomati.
Saizvozvo, kusapa iro rakakumbirwa dhata kana kusagamuchira iyi danho rekuchengetedza data kunoreva kusakwanisika kwekunyorera kune zvemukati uye kugadzirisa zvikumbiro zvakaitwa pane ino webhusaiti.
Hazvina kudiwa kuti iwe upe chero data rako pachako kubhurawuza webhusaiti ino.
Chii data iyi webhusaiti inoda uye nechinangwa chei
androidpop.com ichaunganidza iyo Yega Dhata yeVashandisi, kuburikidza nemafomu epamhepo, kuburikidza neInternet. Iyo Yega Dhata yakaunganidzwa, zvinoenderana nenyaya imwe neimwe, inogona kunge iri, pakati pevamwe: zita, zita rezita, email uye yekubatanidza kubatana. Zvimwechetezvo, mune zvechibvumirano chemasevhisi, kutenga mabhuku uye kushambadzira, ini ndinokumbira Mushandisi kune mamwe mabhengi kana data rekubhadhara.
Webhusaiti ino ichangoda data rakanyatso kukwana nechinangwa chekuunganidza uye yakazvipira ku:
Regedza mashandisiro e data rako pachako.
Pseudonymize yako pachako data zvakanyanya sezvazvinogona.
Ipa pachena kujekesa mabasa uye kugadzirisa kwema data ako ega kunoitwa pane ino webhusaiti.
Bvumidza vese vashandisi kuti vatarise kugadzirisa kwe data ravo rinoitwa pane ino webhusaiti.
Gadzira uye uvandudze zvinhu zvekuchengetedza kuti akupe zvakanakisa kuchengetedza mamiriro.
Izvo zvinangwa zve data yakaunganidzwa mune ino portal ndeinotevera:
Kupindura kune izvo zvinodiwa nevashandisi ve es. Semuenzaniso, kana mushandisi akasiya ruzivo rwavo rwega mune chero mafomu ekuonana, tinogona kushandisa iyi data kupindura kuchikumbiro chako uye kupindura chero kusahadzika, zvichemo, zvirevo kana kunetsekana kwaungave uine maererano neruzivo rwakaisirwa paSiti. Webhu, masevhisi anopiwa kuburikidza neWebhusaiti, kugadziriswa kwedata rako pachako, mibvunzo ine chekuita nezvinyorwa zvemutemo zvinosanganisirwa muWebhusaiti, pamwe nemimwe mibvunzo yaungave unayo.
Kutonga runyorwa rwezvinyoreswa, kutumira matsamba, kukwidziridzwa uye chakakosha kupa, mune iyi kesi, isu tinongoshandisa email kero uye zita rakapihwa nemushandi kana uchigadzira kunyorera.
Kuti uve pakati nepakati uye upindure kumashoko akaitwa nevashandisi pablog iri.
Kuti uve nechokwadi chekuteerera nemamiriro ekushandisa uye nemutemo unoshanda. Izvi zvinogona kusanganisira kuvandudzwa kwematurusi uye maalgorithms anobatsira ino webhusaiti kuvimbisa kuvanzika kwedhata remunhu raanotora.
Kutsigira nekuvandudza masevhisi anopihwa newebsite ino.
Kutengesa zvigadzirwa uye masevhisi anopihwa pane ino webhusaiti.
Mune zvimwe zviitiko, ruzivo pamusoro pevashanyi kune ino saiti yakagoverwa zvisingazivikanwe kana kuunganidzwa nevatatu mapato sevashambadziri, vanotsigira kana vehukama nechinangwa chega chekuvandudza masevhisi angu uye kuita mari webhusaiti. Yese mabasa ekugadzirisa aya anozotongwa zvinoenderana nemutemo tsika uye kodzero dzako dzose maererano nedziviriro yedata richaremekedzwa zvichienderana nemirairo zvazvino.
Pane yega yega, mushandisi ane kodzero dzakazara pamusoro pevo data pachavo uye kushandisa kwavo uye anogona kuvadzidzisa chero nguva.
Pasina mhaka iyo webhusaiti ino ichaendesa yega data yevashandisi vayo kune vetatu vasina kumbovazivisa uye kukumbira kubvumirwa kwavo.
Mabasa anopihwa nevatatu mapato pane ino webhusaiti
Kuti ipe masevhisi anodiwa zvakanyanya kuti basa rayo riitwe, Online servicios Telemáticos SL inogovera data nevatengi vanotevera pasi pemamiriro avo ekuvanzika.
Webhu saiti: WordPress.org
Courier masevhisi uye kutumira tsamba tsamba: MailChimp. 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308.
Cloud kuchengetedza uye backup: Dropbox -Drive, Wetransfer, Amazon Web Services (Amazon S3)
Yako data data Captor masystem anounganidzwa newebsite ino
Iyi webhusaiti inoshandisa akasiyana ruzivo rwekubata ruzivo. Iyi webhusaiti inogara ichida mvumo yekutanga yevashandisi kugadzirisa data ravo rega nekuda kwezvakaratidzwa.
Mushandisi ane kodzero yekudzosera kubvuma kwavo kwekutanga chero nguva.
Masystem ekubata ruzivo rwemunhu runoshandiswa ne androidpop.com :
Zvemukati zvekunyorera mafomu: Mukati mewebhu mune mafomu akati wandei ekuti ubhadhare chipeto.Tarisa mubhokisi rako remaimeri. Mushandisi anofanira kusimbisa kunyorera kwavo kuti asimbise yavo email kero. Iyo data yakapihwa inozoshandiswa chete kutumira iyo Tsamba uye kukuchengeta iwe uchigadziriswa pane nhau uye zvakanangana zvinopihwa, zvakasarudzika kune vanyoreri vees. Nhau yacho inotarisirwa ne MailChimp.
Paunenge uchishandisa masevhisi eChiratidzimbo cheChiratidziro chekuitisa e-mail kushambadzira, kunyoresa manejimendi uye kutumira matsamba, iwe unofanirwa kuziva kuti MailChimp Iyo ine maseva ayo akagoverwa muUS uye saka yako pachako data vanoendeswa kune dzimwe nyika kune nyika inonzi isina kuchengetedzeka mushure mekuparadzwa kweSecurity Harbour. Nekuita kunyorera, iwe unobvuma uye unobvuma kune yako data ichichengetwa neChannelChimp papuratifomu, yakavakirwa muUnited States, kuitira kuti itarise kutumirwa kwematsamba anoenderana. Emailchimp yakagadziriswa kune EU standard zvirevo pane dziviriro yedata.
Mafomu Okupindura: Webhusaiti inosanganisira fomu yekutaurisa post. Mushandisi anogona kutumira zvaunofunga pane izvo zvakatumirwa. Iyo yega data yakapinda fomu yekuisa aya makomendi ichashandiswa chete kune mwero uye kuaburitsa.
Fomu Rekutaura: Iko kune zvakare fomu yekutaurirana yemibvunzo, mazano kana nyanzvi yekuonana. Mune ino kesi kero yeemail ichashandiswa kupindura kwavari uye kutumira iyo ruzivo iyo mushandisi anoda kuburikidza newebhu.
Download Systems: Pa webhusaiti iyi iwe unogona kutora zvinyorwa zvakasiyana izvo zvinowanzoiswa nguva nenguva mune zvinyorwa, vhidhiyo uye odhiyo faira. Mune ino kesi, email inodiwa kuti ivhure fomu rekunyorera. Ruzivo rwako runoshandiswa zvinangwa zvinoratidzwa kune vanonyorera.
Kutengesa zvinyorwa: Kuburikidza neiyo portal iwe unogona kutenga zvinyorwa uye infoproducts kubva paInternet servicios Telemáticos SL, mune iyi kesi, ruzivo rwevatengi (zita, surname, uye runhare, positi kero uye e-mail) inodikanwa kuburikidza nePaypal chikuva fomu. yekubhadhara.
Vashandisi vanogona bvisa chero nguva yemasevhisi akapihwa na androidpop.com iyo imwe Tsamba.
Mushandisi anowana mukati meiyi saiti, mapeji, kukwidziridzwa, vashanduri, kuwirirana zvirongwa inowana iyo yekushandisa yekuvhurika kwemushandisi yekumisikidza mushandisi wemashandisi uye kuratidza kushambadzira kwevashandisi kunoenderana nekutarisira kwavo maitiro uye maitiro. Iyi ruzivo inogara isingazivikanwe uye mushandisi haazivikanwe.
Ruzivo rwunopihwa paaya Sites akatsigirwa kana vanobatana zvinongedzo pasi pemitemo yekuvanzika inoshandiswa pane idzo Sites uye haizotongova pasi pechengetedzo iyi. Nekudaro, isu tinokurudzira zvikuru Vashandisi kuti vaongorore zvakadzama marongero ehukama emubatanidzwa.
Yakavanzika Policy yekushambadzira yakapihwa muAdsense: Google Adsense.
Yakavanzika mutemo wekutevera masosi anoshandiswa pane ino saiti:Google (Analytics)
Androidpop.com inodzidza zvakare zvinodiwa nevashandisi vayo, hunhu hwavo, huwandu hwemigwagwa, uye rumwe ruzivo pamwe chete kuti vanzwisise zviri nani vateereri vedu uye zvavanoda. Kuteedzera zvatinofarira zvevashandisi kunotibatsirawo kukuratidza kushambadza kwakanyanya.
Mushandisi uye, kazhinji, chero munhu wechisikigo kana wepamutemo, anogona kumisa hyperlink kana technical link mudziyo (semuenzaniso, zvinongedzo kana mabhatani) kubva pawebhusaiti yavo kuenda androidpop.com (iyo "Hyperlink"). Kumisikidzwa kweiyo Hyperlink hazvireve mune chero mamiriro ezvinhu kuvapo kwehukama pakati peandroidpop.com uye muridzi weiyo saiti kana yewebhu peji iyo iyo Hyperlink yakagadzwa, kana kugamuchirwa kana kubvumidzwa ne androidpop.com yezviri mukati kana services. Chero zvazvingaitika, androidpop.com inochengetera kodzero yekurambidza kana kuremadza chero hyperlink kune iyo Webhusaiti chero nguva.
Kurongeka uye chokwadi cheiyo data
Mushandisi anovimbisa kuti iyo yega data yakapihwa kuburikidza nemhando dzakasiyana ndeyechokwadi, ichisungirwa kutaurirana chero shanduko yayo. Saizvozvo, Mushandisi anovimbisa kuti ruzivo rwese rwunopihwa runoenderana nemamiriro avo chaiwo, kuti zviri zvechizvino uye ndezvechokwadi. Zvakare, Mushandisi anozvipira kuita kuti dhata ravo rivandudzwe nguva dzese, achingova nemhosva yekusarongeka kana kunyepa kwedata rakapihwa uye nekukuvara kunogona kukonzerwa neizvi kuInternet Servicios Telemáticos SL semuridzi weiyo androidpop.com webhusaiti .
Kurovedzera kwekodzero dzekuwana, kugadzirisazve, kudzima kana kupikisa
Kodzero dzeVashandisi ndidzo dzinotevera:
Kurudyi kubvunza kuti ndeipi data yako yatinosungira nezveMushandisi chero nguva.
Kurudyi kubvunza isu kuti tivandudze kana kururamisa yemahara isiriyo kana yakabuda dhata yatinochengeta nezveMushandisi.
Kodzero yekunyora kubva chero kushambadzira kwekutaurirana kwatingaendesa kuMushandisi.
Iwe unogona kutungamira yako kutaurirana uye kushandisa kodzero dze kupinda, kugadzirisazve, kudzima uye kupikisa kubudikidza neposita kutumira tsamba kuC / Blas de Otero nº16 1º Iz. -18230 - Albolote (Granada) kana neemail: info (pa) contact.online pamwe neiyo proof proof mumutemo, senge fotokopi yeDNI kana yakafanana, zvichiratidza mune "DATA PROTECTION".
Mushandisi anozivisa kuti akaudzwa nezve mamiriro ekudzivirirwa kwe data rako, kubvuma uye kubvuma kurapwa kwaro neInternet Servicios Telemáticos SL nenzira uye nezvinangwa zvinoratidzwa mu ziviso yepamutemo.
Pamhepo Servicios Telemáticos SL inochengetera kodzero yekugadzirisa mutemo uyu kuti uugadzirise mutemo mutsva kana jurisprudence pamwe nemaindasitiri maitiro. Muzviitiko zvakadaro, Mupiro achazivisa pane ino peji shanduko dzakaunzwa nekutarisira kwakaringana kwekuitwa kwavo.
Zvinoenderana neLSSICE, Online Servicios Telemáticos SL haite maSSPAM maitiro, saka haitumire emaimeri ekutengesa ayo asina kumbobvunzwa kana kupihwa mvumo neMushandisi, pane dzimwe nguva, anogona kutumira ayo ega kukwidziridzwa uye chaiwo zvipo uye vechitatu mapato, chete muzviitiko apo iwe unemvumo yevanogashira. Nekudaro, mune yega yega mafomu akapihwa paWebhusaiti, Mushandisi ane mukana wekupa mvumo yake yekugamuchira yangu "Tsamba", zvisinei neruzivo rwekutengesa rwakakumbirwa. Iwe unogona zvakare kukanzura kunyorera kwako otomatiki mune iwo mamwe Mapepanhau.